बिज्ञापन सम्बन्धमा बिज्ञापन अर्थ सरोकार डटकमको एक मात्र आय स्रोत हो । तर बिज्ञापनका नाममा हामी कसैको गलत कामलाई ढाक छोप गर्दैनौं । हामीसँग बिज्ञापनको आडमा जोडिन खोज्ने र बजारमा अनैतिक कार्य गर्न खोज्नेहरुदेखि हामी सचेत छौं । विगतमा हामीले भ्रष्ट कम्पनीको विज्ञापन फिर्ता पठाएका उदाहरणहरु पनि छन् ।
नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादन वा सेवाको पहुँच पुर्याउने हो भने हामी उत्तम बिकल्प हुन सक्छौं । छोटो सब्दमा भन्नु पर्दा हामी 'ब्र्यान्डेड' छौं। हामीसंग बिज्ञापनका मार्फत बाट जोडिन चाहानेहरुका लागि हाम्रो ठेगाना निम्नानुसार छ :
शुभम् मिडिया प्रा.लि.
फोन न‍‍‍. :९८५१०१७९१४ इमेल : arthasarokarnews@gmail.com